Primaquine - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Primaquine
Generic Name: Primaquine Brand Name(s): Generics only. No brands available.
အသက်ရှူကြပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေမယ်လို့လုံးဝကိုမထင်မှတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေနဲ့ သက်သာစေမယ့်နည်းတွေ။
ကလေးငယ်ပထမနှစ်, ကလေးကျန်းမာရေး, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
မွေးပြီး သိပ်မကြာခင် ကလေးအသားတွေ ဝါနေပြီလား။ ဒါလေးတွေသိထားဖို့လိုတယ်နော်။ ။
ကျန်းမာရေးစင်တာ (EN), ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ
သွေးသွင်းရတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေ သိထားသင့်တယ်နော် ။ ။